I-San Jose State GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data yokwamkelwa
I-San Jose State GPA, iSAT kunye ne-ACT Graph
I-San Jose State University i-GPA, izikolo ze-SAT kunye ne-ACT. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
Ulinganisa njani kwiSunivesithi yaseSan Jose State?
Ingxoxo yeSingqinisiso seSan Jose State State's Admissions Standards:
Ngo-2015, ama-55% wabafake izicelo bavunyelwa kwiSizwe saseSan Jose , esinye sezikolo ezingama-23 kwi- University State University University . Nangona kunjalo, uzakufuna amabakala ahloniphekileyo kunye namanqaku okuvavanya ukuba ungene kuwo. Amachaphaza aluhlaza kunye noluhlaza okwesibhakabhaka angentla achaza abafundi abamkelekileyo. Uninzi lwabafakizicelo abaphumeleleyo banomlinganiselo "B" okanye ngaphezulu, izikolo ze-SAT (RW + M) ezingama-950 okanye ngaphezulu, kunye ne-ACT izikolo ezili-18 okanye ngaphezulu. Abanye abafundi abanamabanga aphantsi kunye namanqaku angenawo. Nangona kunjalo, phawula ukuba kukho amachaphaza abomvu (abafundi abafunyenweyo) phakathi kwegrafu. Abanye abafundi abanamabanga kunye namanqaku okuvavanya abonakala bejoliswe kuRhulumente waseSan Jose baya kukhishwa.
Ngokungafani neYunivesithi yaseCalifornia , inkqubo yokungeniswa kweYunivesithi yeNyuvesi yaseNorthern California ayiyiyo yonke into. Ngamanye amagama, akuthathelwanga ngokunyanisekileyo amanyathelo angafani namanani, iimvavanyo, imisebenzi yangaphandle, kunye neencomo zootitshala. Oku akuyinyaniso kubafundi be-EOP. Njengokuba kukho phantse nayiphi na iikholeji, ukulungelelaniswa kwesikolo sakho esikolweni esiphakamileyo kunokudlala indima ebalulekileyo, kwaye impumelelo kwi-AP, IB, i-Honors, kunye neeklasi ezibhalwe kabini ziyi-piece efanelekileyo kwi-equation equation. Sekunjalo, ama-graddes kunye namanqaku okuhlolwa asemgangathweni ziphambili kunoma yisiphi isicelo kwiSifundazwe saseSan Jose, kwaye isizathu sokuba umfaki-sicelo enze amanqaku afanelekileyo kunye namabakala ayanqatshelwa ahlale ehla kwizinto ezinjengeklasi ezilungelelanisi zokulungiselela okanye isicelo esingaphelelanga.
Ukuze ufunde kabanzi malunga ne-San Jose State, ii-GPA zezikolo eziphakamileyo, izikolo ze-SAT kunye nama-ACT, amanqaku angancedisa:
IProfayili yaseSan Jose State Admissions
I-Hofstra University GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Simmons College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Galaxies Active kunye neeKasasta: IiMonsters zeCosmos